Semalt Expert Anotsanangura Kusiyana Pakati Pemudhiyoyo SEO Uye Mobile SEO
6NH7800-4AA00 SIEMENS.jpg" border="0" width="100%" style="margin-bottom:35px; margin-top:10px" align="absmiddle">
Mukutengeserana kwemajeri, maitiro akawanda eSOO haafungi nezvemajaira evashanyishandisai kusvika pawebsite. Zvizhinji zvebhizimisi zvinokurumidza kukanganwa kugadzirisa mawebsite avo nekushanda kwefoni pavanenge vachiitawebsite yekutsvaga. Zvidzidzo zvenguva pfupi zvakaratidza kuti foni dzemafoni dziri kutora mahwendefa pakushandisa internet pa4% muzana. Uyezve,zvakawanda zvekutsvaga injini yekutengesa inouya kubva kumaselula, kwete PC pakombiyuta yakafanana.
Mamwe mabhizinesi ari kutora izvi zvakakosha kuti azadze mutengo wemusika. Semuyenzaniso,vanhu vazhinji vanoshandisa foni kuti vaone internet. MunaJanuary gore rino, Google yakajekesa kuti imwe yenzira dzadzo yekushanduramitsara yewebhu ndiyo nzira iyo masayiteti ari kupindura.
Kutsvaga Engine Kugadzirisa kunosanganisira kuwedzera kuonekwa kwewebsite yepaIndaneti.Tsvaga injini dziri kutora chikamu munharaunda iyi. Zvose zvavanoshandisa zvinosanganisira kugadzira mawebsite anobatsira. Kubva kune web developermaonero ekuona, maSOO akawanda maitiro ekufambisa webusaiti webhusaiti anoshandiswa zvakasiyana zvachose kubva pakushandiswa kwedhiyo desktop.
Mobile SEO yakasiyana neyodhindwa redesktop SEO. The expert of Semalt Digital Services, Ross Barber anotsanangura zvinhu zvekusiyanisa uku.
Kuona zviwanikwa..Google nechinangwa inopa migumisiro yemunharaunda yepamusoro kune fonizvishandiso. Izvi zvinoita kuti SEO yemunharaunda yakwanise zvakakodzera webhusaiti yepaifaira. Kutsvakurudza kwakaitwa geo-modified kunogona kusvika kumafoni eserura nokukurumidza kupfuuravanoenda kumadheksipiti. Panguva imwecheteyo, nzira imwecheteyo pane desktop ingatungamirira kune zvinyorwa zvinyorwa pane dzakawanda domains. Somugumisiro, vazhinjimakambani anoramba kuteerera mutsauko uyu. Zvisinei, unogona kubatsirwa neizvi kuburikidza nekushandisa mazita ezvinyorwa zvebhuku redeskiti yako. Panguva imwe,Kugadzirisa zvinhu zviri pawebsite yako yepamusoro kuchadzorera hukama hwako uye hukuru hwepamusoro kuburikidza ne301 redirects.
Kudana-ku-kuita mabhoti mapping. Vazhinji vashandisi vewebhu vanoenda kunewebsite kuti vawane ruzivo kanakutenga. Nhare dzemafoni dzinoda mabhii makuru akaiswa mukati. Izvi zvinobvumira vashandisi vepa smartphone kuti vasave nechinetso nekunakidza kwavopurogiramu. Kunyange zvakadaro, pikorodhi rinogona kusiyanisa zvakanyanya-zvakasanganiswa mazano uye chengeta imwe neimwe zvakakodzera.
Mukati. Mumagetsi ose ekudhinda, zvinyorwa uye zvinyorwa ndiwo mazano makuru.Tsvaga Engine Optimization inotenderera kune keywords uye zvinyorwa. Zvisinei, nzira iyo inonyanya kuisa mashoko ekufambisa webasaiti haisi iyo nzirainoenda pane desktop desktop. Somuenzaniso, desktops inoda kukosha kwekodzero uye ruzivo rwekugovera. Nokuda kwechikonzero ichi, desktop yehuwandu inogonakusvika kusvika kumashoko 1000 uye kuva nechekisi duku kuti uise zvinyorwa zvakanaka. Zvisinei, iyi haisi iyo yekufambidzana neshamwariwebsites. Terevhizheni mabhiiyo anoita zvakanakisisa nemafonti makuru uye zvinyorwa zvinobva pamashoko 300 kusvika kumashoko 700.
Makambani mazhinji haakwanisi kutora matanho ekufambisa mafambiro pavanenge vachigadzirisawebsites. Kune nzira dzakawanda umo SEO yerunhare inofananidzwa kubva kudesktop SEO. Semuenzaniso, nzira yefodya ye SEO inotanga kushandisa zvishomazvinyorwa muhombodo huru iyo inopesana nezvinodiwa neGoogle kubva pane zvinyorwa kuiswa pakombiyuta PC. Mabhizimisi akawanda akaitanzvimbo dzavo dzekufambidzana neshamwari dzinotora zvikomborero kubva kune iri sarudzo. Nokudaro, kusiyana uku kunogona kubatsira SEO makambani enyukuwedzera kunosvika kunze uye kuwana vaenzi vakawanda kubva kumafoni efoni.